Amazonie extrême : Fizahantany Handresena Haintany · Global Voices teny Malagasy
Amazonie extrême : Fizahantany Handresena Haintany
Voadika ny 07 Marsa 2016 13:20 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Deutsch, Aymara, Nederlands, Ελληνικά, Português
Ao an-tanànan'i Maripa, vita avy tamin'ny hazo sy ravinà satrana ireto tranobongo ireto, saingy mahazo tombony amin'ny herinaratra mandalo amin'ny tambajotra ho an'ny daholobe. Flávio Forner/INFOAMAZONIA
Ity no ampahany faharoa (amin'ireo efatra), fanadihadiana momba ny “Amazonie extrême” (lahatsoratr'i Camila Fróis sary an'i Flávio Forner) notontosain'ny InfoAmazônia, navoaka etoana noho ny fifanarahana fifampizaràna vontoaty. Vakio ato ny ampahany voalohany.
Asa fanorenana faran'izay tsotra indrindra notafoina ravina satrana, tsy misy rindrina, misy fandriana mihantona, ary mipetraka eo an-tsisin'ny renirano Tapajós. Ireo igarapés (sampana tery sy tsy dia lalina loatra amin'ny renirano ao Amazonia) mampangatsiatsiaka ny ala, ny hazavan'ny masoandro mivolom-bolamena toy ny mitroatra avy any anaty onja amin'ilay vao mangiran-dratsy iny sy ny alina ambany lanitra feno kintana mifanaretsaka no miantoka ny asa rehetra mandritry ny taona ao amin'io toerana ao Jamaraquá io. Ny fizahantany mivady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia loharanom-bola ho an'ireo mponina ao. Betsaka no manao ny asan'ny mpitaridia any an'àla amin'ny karama 100 realy isanandro (eo amin'ny 25€ eo), betsaka noho izay azo amin'ny asa hafa ao anaty ala ao.
Nomena anarampetaka hoe “ny” Pedrinho (Pierre Kely), midehaka i Pedro da Gama ho nahay nampiasa vola tamin'ny fandraisana ireo mpizaha tany ho toy ny fanampin'ny fampidirambola rehefa tonga ny vanimpotoana sarotra : “Somary miha-mafàna hatrany isantaona, mihavitsy ny trondro tazana ao anaty rano ary tena mihamaina ny tany rehefa “ririnina””, hoy izy.
Na hita ho toy ny zavatra iray azo araraotina ho fanatsaràna ny fiainana ao amin'ny faritra aza ny fizahantany, mbola lavitra an'ireo tanàna rehetra ao amin'ny lemak'i Tapajós ny hànana fitaovana toy izay efa ananan'i Jamaraquà : rano fisotro madio sy herinaratra. Ao amin'ny “Reserva Extrativista” (Resex) Tapajós-Arapinus, eny ampitan'ny renirano, ohatra, tsy misy làlana hahatongavana ao an-tanàna, tsy misy famokarana herinaratra ary betsaka no tsy maintsy mandeha mantsaka mivantana eny an-drenirano satria tsy manana fotodrafitrasa fanangonana rano.
Rehefa atambatra, misy vohitra 103 eo ho eo manelanelana an'i Flona sy Resex, izay amin'izy rehetra dia 6 monja no mahazo famatsiana herinaratra tsy tapaka, ary 65 no manana rafitra fitsinjarana rano. “Rehefa vanimpotoanan'ny orambe na maintany dia misedra olana goavana ireo izay tsy miankina afa-tsy ny natiora mba hamelomana vady aman-janaka”, hoy i Pedro da Gama. “Maty ny ampahany betsaka amin'ny zavamaniry, satria fasehana be ny tany. Lasa mafàna tafahoatra ny tany ary maty ireo hazo mpanome alokaloka, toy ny cajueiro ( anacardier na acajou à pommes), ny cupuaçu ( fianakavian'ny cacoyer) na ny muricizeiro (Byrsonima crassifolia= morossis) ” hoy ” ny Pierre Kely” manampy.
Eny an-dàlana manamorona ny rano, resahany ny ahiahiny momba ireo biby ao an'ala : “Fiovàna goavana ho azy ireo io haintany io, tsapan'ireo vorona izany, ireo paresseux (biby kamo) ihany koa, mitontona amin'ny tany ary matin'ny tsy fisian'ny sakafo izy ireny”, hoy ny fitsaran'i caboclo, tao anaty fitantaràna iray izay mahakasika indrindra ny avaratra-atsinanana, somary karankaina, ao Brezila.
Ireo mponina amoron-drano ao Flona no nonina teto talohan'ny nanorenana ny “faritra arovana”. Manana fiaviana indizena ry zareo, mivelona amin'ny voly mangahazo, jono ary ny fitrandrahana ny ala.
Endriky ny haintany ao amin'ny faritr'i Tapajós.